Dadka da`da dhexe ku jira oo lagu borriyay inay rucleeyaan - BBC News Somali
Dadka da`da dhexe ku jira oo lagu borriyay inay rucleeyaan
Image caption Maureen ayaa hadda hoggaamisa koox socod joogto ah sameysa
Dadka da` dhexaadka ah ayaa lagu boorrinayaa inay socod rucle ah socdaan si ay caafimaadkooda u ilaaliyaan, iyadoo walaac laga muujinayo in dhaqdhaqaaq yaraanta ay saameyn ku yeelato caafimaadkooda.
Saraakiisha Caafimaadka Dadweynaha ee England ayaa sheegaya in baaxadda wax-qabadka dadka uu sii yaraado marka ay gaaraan da`da 40-ka.
Waxay ku borrinayaan dadka ay da`doodu u dhaxeyso 40 ilaa 60 inay bilaabaan socod rucle ah.
Keliya 10 daqiiqo oo socod ah ayaa is beddel weyn sameyn karta, iyadoo hoos u dhigeysa dhimashada xilliga hore 15%, sida ay sheegayaan.
Balse waaxda Caafimaadka Bulshada ee England ayaa sheegaya in afar ka mid ah 10-kii qof ee da`doodu u dhaxeyso 40- ilaa 60 aysan xitaa sameyn Karin rucleyn muddo 10 daqiiqo ah bil walba.
Si dadkaasi loo caawiyo, ayay waaxdu ku talineysaa app bilaash ah oo lagu magacaabo- Active 10 - taas oo la soconeysa inta rucleyn ee uu qofku sameeyo waxayna ka caawineysaa qaab uu rucleynta ugu soo daro howlihiisa maalmeed.
Maureen Ejimofor, oo 44 sano jir ah, waxay bilowday inay socod joogto ah sameyso saddex sano kahor si ay caafimaadkeeda sare ugu qaaddo.
Xilligaasi, culeyskeedu saa`id ayuu ahaa waxayna dooneysay inay isbeddel sameyso. Muddo toddoba bilood gudahood ah ayayna culeyskeeda ku dhintay.
Waxay ku biirtay koox socod joogto ah sameysa oo ka aasaasan deegaanka Kent ee dalka Britain, aad beyna u jecleysatay inay kooxdaasi hoggaamiso, ayna dadka u kaxeyso socod fasaxa toddobaadka.
Dhaqaatiirta ayaa sidoo kale lagula taliyay in bukaannada ay ku dhiirri-geliyaan inay socod rucle ah socdaan - socodkan ayaa qofka ka dhigaya inuu aad u neefsado isla markaana sare u qaadaya garaaca wadnihiisa.
Dr Zoe Williams, oo ka tirsan dhaqaatiirta cudurrada guud ee Royal College, ayaa sheegay in dhaqaatiirta looga baahan yahay inay bukaannadooda la hadlaan oo fahansiinyaan faa`iidada socodka rucleynta.